မောင်မျိုး January 11, 2011 at 12:21 AM
အစ်မက ဇန်န၀ါရီလဖွားပဲး)
ဘာမှမစားလိုက်ရတာတော့ နာတယ်ဗျာ အစေားဆုံးမွေးနေ့ရောက်တဲ့သူက အိမ်ပေါက်ဝကနေ အူလည်လည်နဲ့ ပြန်သွားတယ် စားချင်လွန်း နောက်နေ့ကျ တစ်ခုခု ချက်ပြီး တင်ပေးပါ ။
pandora January 11, 2011 at 12:40 AM
ချ​စ်ေ​သာ မ​သ​က်ေ​၀ေ​လး​ဆ​ယ့်​ကိုး​နှ​စ်ြေ​မာ​က်ေ​မွးေ​န့​​မှာ ပျော်​ရွှင်ချ​မ်ြးေ​မ့​ပါေ​စေြ​ကာ​င်း ဆု​မွ​န်ေ​ကာ​င်းေ​တာ​င်း​လိုက်ပါ​တ​ယ်။ :P
Kay January 11, 2011 at 12:46 AM
အား.. တစ် .. ငါးလုံး တောင် ပါလား..
လက်ဆောင်တွေ အများကြီး ရတော့.. အိပ်စ်ပို သွားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့.. မမကွန် နဲ့..ဘူဂစ်စ် ကို လည်း လိုက်စရာ မလို..း)
နေ့ ထူး နေ့ဆန်း လေး မှာ ကျရောက်တဲ့..ပျော်ရွှင်ဖွယ်.. မွေးနေ့.. အတွက်..
rose January 11, 2011 at 12:54 AM
မမသက်ဝေ၏ ဇန်န၀ါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝ၍ သာယာ ပျော်ရွှင်သည့် ဘ၀လေးကို ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေသော်
Hmoo January 11, 2011 at 12:54 AM
kaungkinpyar January 11, 2011 at 1:06 AM
Hmoo January 11, 2011 at 1:07 AM
မေဓာဝီ January 11, 2011 at 1:09 AM
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် မွေးနေ့ မင်္ဂလာရက်မြတ် ဖြစ်ပါစေ အမ သက်ဝေ ရေ ...
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၁ ငါးလုံး ဆုံတဲ့နေ့ကလေးနော်။ ဒီမှာတော့ ၁၁ ရက် မရောက်သေးဘူး။ ၁၀-၁-၁၁ ပဲ ရှိသေးတယ်။
၁၁ ရက် ၂၀၁၁ မှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှသည် ရာသက်ပန်လုံး မီး ၁၁ ပါး ငြိမ်းပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
myo January 11, 2011 at 1:47 AM
မမသက်ဝေနဲ့ ဗစ်နဲ့က မွေးနေ့တူတူကိုးးး
ရွှေရတုမှတ်တမ်း January 11, 2011 at 1:56 AM
Anonymous January 11, 2011 at 2:03 AM
လိမ်တယ်.. ဟွင်း.. ၅၁လည်းပြောသေး..
ပလပ်စ် (or) မိုင်းနပ်စ် ၃၆ ပေါ့။ :P
သစ်နက်ဆူး January 11, 2011 at 5:25 AM
မွေးနေ့ မှာ အတိုင်းထက်အလွန်ပျော်ရွှင်ပြီး လိုအင်ဆန္ဒ
ငွေစန္ဒာ January 11, 2011 at 5:48 AM
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) January 11, 2011 at 7:07 AM
အမက ဘယ်နှစ် နှစ်ပြည့်လဲ၊ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အမရေ ...
အပြုံးပန်း January 11, 2011 at 7:11 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်သော မွေးနေ့ပါ အမသက်ဝေ၊
Flyer မှာ မွေးနေ့ပွဲ သွားလုပ်ပါအမ၊ နှစ်ယောက်တည်းပေါ့၊
Vista January 11, 2011 at 7:17 AM
မင်္ဂလာမွေးနေ့ ပါ အမသက်ဝေ ကျနော်က တော့ ခွင့်မယူနိုင်ဘူးဗျာ ..မြန်မာပြန်လည်ဖို့ ခွင့်စုထားလို့ဟိ။ မသက်ဝေနဲ့ ကျနော်နဲ့ မွေးနေ့ တူတူပဲနော် ၁၁-၁-၁၁ ပျော်စရာပဲ ။ !!!
ညီမလေး January 11, 2011 at 8:19 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ မမသက်ဝေ ...
အော် .. ဒါနဲ့ January born တွေက ချစ်ဖို့သိပ်ကောင်းတာပဲနော်း)
မြူးမြူး January 11, 2011 at 8:22 AM
Happy Birthday Ma Ma Thet Wai.. :)
Happy 111birthday :D
Thandar Lwin January 11, 2011 at 8:52 AM
Mon Petit Avatar January 11, 2011 at 9:02 AM
Happy Birthday ပါ Ma Ma Thet Wai!
Thant January 11, 2011 at 9:08 AM
ပျော်စရာ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ မမသက်ဝေ.......... :)))
nu-san January 11, 2011 at 9:10 AM
အမက သမီးလေးနဲ့ မွေးနေ့သိပ်မကွာဘူးပဲ.. ဒီနေ့မနက် အိပ်ယာက နိုးတော့ ၁၁-၁-၁၁ ဆိုပြီး တွေးနေသေးတာ.. မင်္ဂလာရှိသော ပျော်ရွှင်သော နေ့လေး ဖြစ်ပါစေ အမ.. :)
Happy Birthday Thet Wai.....Gyidaw
Whatawonderful 11.1.11
MrDBA January 11, 2011 at 9:33 AM
Happy Birthday ဂျီးဒေါ်ကြီး
ဖြူ January 11, 2011 at 10:05 AM
ချစ်စရာကောင်းသော သက်ဝေရဲ့ မွေးနေ့...
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါပြီး လိုရာဆန္ဒတွေ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
ဆုတောင်းတွေ အများကြီးပဲ... တို့တောင် နောက်ကျနေတယ်...
Y January 11, 2011 at 10:18 AM
Happy Birthday Honey...!!
Stay young & cheerful always...
ပုံရိပ် January 11, 2011 at 10:25 AM
မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ မသက်ဝေ။ လိုအင်ဆန္ဒအားလုံး ပြည့်ဝပါစေ။
ZZZ January 11, 2011 at 10:25 AM
နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ ၊ ကောင်းရာမွန်ရာကိုလုပ်နေတဲ့ တရားသံပါနေပါတယ် ၊ ဘ၀ခရီးသွားဖို.အချင်းချင်း ကောင်းရာမွန်ရာကို လုပ်ဖို.တိုက်တွန်းသလိုပဲမှတ်ယူပါ တယ်၊ မသက်ဝေမွေ.နေ.အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ.ပါစေ
mirror January 11, 2011 at 10:37 AM
မကြီး. ဒီမှာလဲတစ်ခါ လာဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ရာ နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။ :)
ဆုမြတ်မိုး January 11, 2011 at 10:41 AM
Happy Birthday တီသက်
Moe Cho Thinn January 11, 2011 at 10:58 AM
နှစ်သိမ့်ရောင့်ရဲ ဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် မွေးနေ့လက်ဆောင် အကြို၊ အကြတ်၊ အတက် အများကြီး မတောင်းရဘူးးး တဲ့.... ကိုကြီးကပြောတယ်။ :P
Happy Birthday ပါ မမရေ..
Little Flower January 11, 2011 at 11:40 AM
လှပသော ဂဏန်းငါးလုံး မှာကျရောက်သော
မွေးနေ့ နှစ်တရာတိုင်စေရန် ဆုတောင်းသည်။
စုချစ် January 11, 2011 at 11:53 AM
Sis Thet Wai....
Not justayear older, butayear better and prettier ever.
Best Wishes and Much Metta, SuuChit
khin oo may January 11, 2011 at 1:22 PM
ဇွန်မိုးစက် January 11, 2011 at 2:43 PM
A very happy to Ama Thet Wai!
May your birthday be filled with smiles, love, and laughter. :)
Wish you haveasmashing year ahead!
sonata-cantata January 11, 2011 at 4:18 PM
အေးချမ်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ ဘ၀ကို အတွေးရောက်ရင်...
ယနေ့ တစ် ငါးလုံး မွေးနေ့ ပိုင်ရှင် သက်ဝေကို သတိရပါတယ်...။
သဉ်ဇာ - Thinzar January 11, 2011 at 5:32 PM
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ အစ်မ.. :) တစ်ငါးလုံး တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ အမှတ်တရပေါ့..
Sunny January 11, 2011 at 5:45 PM
မမသက်ဝေ.. ဒီထူးခြားတဲ့ မွေးနေ့လေးမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
မယ်ကိုး January 11, 2011 at 7:05 PM
မမ Happy happy birthday :)
T T Sweet January 11, 2011 at 8:51 PM
၁ ငါးလုံးတိုက်တဲ့နေ့ ဘာလို့ ခွင့်ယူပါလိမ့် စဉ်းစားနေတာ။ လက်စသတ်တော့ မွေးနေ့ကိုး။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ၅၁နှစ်မြောက်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ အန်တီသက်ဝေရေ။ သားသား၊ ကိုကြီးတို့နှင့်အတူ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မွေးနေ့ပေါင်း တစ်ထောင်မက ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိူင်ပါစေ။
ကလူသစ် January 11, 2011 at 9:34 PM
ရပ်ကွက်ထဲမှာပြောနေတာတော့ ၅၀နဲ့ ၁နဲ့ပေါင်းရင် ၆၀ရတယ်ဆိုပဲ။ ကြိုတင်အသက် ပါထည့်တွက်တယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာ အသက်ကြီးလေ ကောင်းလေပဲ။ ဟက်ပီဘတ်ဒေးပါဗျာ။
rose of sharon January 11, 2011 at 10:00 PM
Happy birthday sis :) ဒီမှာနောက်ကျသွားတယ်... ဖဘ မှာတော့ မွေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးသွားပြီ..
မောင်လေး January 11, 2011 at 10:21 PM
ပန်းခရမ်းပြာ January 11, 2011 at 11:29 PM
လူ့သက်တမ်း တဝက် ကျော်လာပြီ ဆိုလို့
တွက်ကြည့်နေတာ ... ခုထိ အဖြေ မထွက်သေးဘူး။
ညီမလေး Vista အတွက်ပါ မွေးနေ့ဆုတောင်း သွားပါတယ်။
မွေးနေ့မှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ အားလုံးပြည့်စုံပါစေ
SHWE ZIN U January 12, 2011 at 11:45 AM
ံHappy Birthday ပါမသက်ဝေရေ
MS January 12, 2011 at 12:26 PM
Pls accept my Belated Birthday wish...
Happy Birthday Thet Wai..
Hope you gotagreat day yesterday...
sosegado January 12, 2011 at 12:52 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအတိ ရှိပါ စေကြောင်း
ချစ်ကြည်အေး January 13, 2011 at 9:18 AM
ဟာ....အန်တီ သက်ဝေက သာမီးထက် အသက် တဝက်နဲ့တခွဲကြီးများတောင် ကြီးတာပဲ...။ မင်္ဂလာရှိသော တစ်ငါးလုံး မွေးနေ့ပါ သူငယ်ဂျင်းရေ.....
လင်းဒီပ January 17, 2011 at 12:27 AM
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် birthday wish လုပ်ဖို့ နောက်ကျသွားပါသဖြင့် အခုမှ ရောက်လာပါတယ် ။
စာတွေ အများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ အစ်မ ...။
မိုးငွေ့...... January 17, 2011 at 2:32 PM
မွေးနေ့ဒိတ်လေးသိပ်လှတယ် မမသက်ဝေ သည်မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပါစေ.......။